Maxaa helay Kaskii Hooyo-nimo ee kartida lahaa?! | Radio Himilo
Home / MAQAALO / Maxaa helay Kaskii Hooyo-nimo ee kartida lahaa?!
Muqdisho – Dunida maanta aanu guudkeeda dul maashoonayno waxa ay tahay mid wajiyo badan, waxa wiiqmay wax walba oo lagu farmuuqi jiray in ay yihiin wax tayaysan, toosan, tiigsimaad leh oo lagu tashan karo.
Previous: Jesus oo sheegay in City ay leedahay sifada ciyaareed ee xulka Brazil.
Next: Shinbiro halistii ugu weyneyd ku haya bulshada ku nool gobal Maraykanka katirsan.